Wararkii ugu dambeeyay ganacsiga suuqa weyn ee Bakaaraha oo maanta xiran (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay ganacsiga suuqa weyn ee Bakaaraha oo maanta xiran (SAWIRO)
Waxaa maanta gabi ahaan xiran ganacsiga suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho, kadib markii maalintii shalay ganacsatada suuqaasi ay ku hanjabeen inay xirayaan xarumahooda ganacsi.
Ganacsatada suuqa Bakaaraha ayaa weli diidan bixinta canshuur kordhinta ay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ku sameeysay alaabta ay ganacsatada kala soo degaan dekedda weyn ee magaalada Muqdisho, maadaama canshuurtaasi ay tahay mid aysan awood badan u lahayn inay iska bixiyaan.
Mid ka mid ah ganacsatada suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u xaqiijiyay in saakay wax ganacsi ah aanay ka jirin suuqa Bakaaraha, islamarkaana goobahooda ganacsi ay albaabada u xiran yihiin.
Sidoo kale, wuxuu inoo sheegay inay cabashadooda u gudbin doonaan madaxweyne Farmaajo, kadib markii ay heshiin waayeen ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo wasiirka maaliyadda C/raxmaan Ducaale Bayle.
Dhinaca kale, warar hoose oo ay warbaahinta Bulshoweyn heleyso ayaa sheegaya in ganacsatada suuqa Bakaaraha ay saakay isugu tageen dabaqa Waaheen ee ku yaallo agagaarka Maalin Taajir, halkaasi oo lagu wado inay warbaahinta kula hadlaan.
Illaa iyo haatan ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo ay kaga hadlayaan xirnaanshiyaha suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho.